विद्यार्थीलाई यौन हिंसा न्युनिकरणका लागि आत्मरक्ष तालिम - Nigranitimes
होमपेज / खेलकुद / विद्यार्थीलाई यौन हिंसा न्युनिकरणका लागि आत्मरक्ष तालिम
विद्यार्थीलाई यौन हिंसा न्युनिकरणका लागि आत्मरक्ष तालिम
आइतबार, पुष ११, २०७८ , निगरानी टाइम्स
पुस ११ गते, पथरी । मोरङको पथरीशनिश्चरे स्थित पञ्चायत माविका विद्यार्थीलाई यौन हिंसा न्युनिकरणका लागि आत्मरक्षा १८ दिने तालिम समापन भएको छ ।
फाइट ब्याक र शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग (युएनएचसीआर)को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रम आइतबार पञ्चायत माविमा समापन भएको हो । पञ्चायत माविको कक्षा ५ देखि १० कक्षासम्मको ७ सय १९ जना विद्यार्थीलाई आत्मरक्षा सम्बन्धि तालिम दिएको पञ्चायत माविका प्रधानाध्यपक अर्जुन कुमार बुढाथोकीले बताए । । तालिममा छात्रा ४ सय ५४ र छात्र २ सय ६५ जना सहभागि जनाएको थियो । तालिम १८ दिनसम्म चलेको थियो ।
यौंन हिंसा के हो ? सुरक्षित रहन के गर्ने ? रोकथामको उपाय र मद्दत कहाँबाट लिने लगायतको बारे विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई समेत तालिम दिइएको प्रशिक्षक पुजा गुरुङले जनाए । छात्राहरुलाई चार लटमा तीन दिनको दरले र छात्रलाई एक दिनको दरले तालिम दिइएको थियो ।
युएनएचसीआरको सहयोगमा भएको तालिममा रबिना लामा, रोश्नी थिङ, शन्तोष सिग्देल, अश्विन चौधरी, टिना मानन्धर र ममता जे प्रकाश सिंहले दिएका थिए । फाइट ब्याकले नेपालको ३० वटा जिल्लामा यस्तो तालिम दिइसकेको प्रशिक्षक पुजा गुरुङले बताए ।